I-SP-G38 120ml eyenziwe ngesandla ngeglasi ye-Ultrasonic Arhente, China I-SP-G38 120ml eyenziwe ngesandla ngeglasi ye-Ultrasonic Arhente yabavelisi, abaXhasi, abaFektri -Sunpai Industries Limited
I-SP-G38 120ml eyenziwe ngezandla Iglasi ye-Ultrasonic Arhente yeArhente
Indawo yokuqala: Shenzhen
Igama lebrand: I-Soicare
Inani Model: I-SP-G38
yokuqinisekisa: ISO9001-2015, CE, RoHS, UL, FCC, SGS
Isixa esincinci soMyalelo: Izixhobo ze-500
Iinkcukacha zoPakethe: Amacwecwe ayi-12 / ibhokisi
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezingama-25-45 zixhomekeka kubungakanani
Immimiselo yokuhlawula: I-50% yedipozithi, ibhalansi ngaphambi kokuziswa
Supply Ukubanako: Iziqephu ze-100000 ngenyanga
I-120ml yeGlasi yeZandla eziCwangcisiweyo yeArms yeArhente
1.7 Umbala weeLights ze-LED eziTshintshayo: Ioyile ebaluleke kakhulu kwiNtloko yokuCinga komntwana wakho nge-7 eguqukayo yezibane zeMood, nganye ezinokuhlengahlengiswa phakathi kwendlela eKhanyayo kunye neDim, umbala unokusetwa uzinzile. Ukukhanya okukhulu kubantwana boyika ubumnyama ngexesha lokulala. 7 imibala yokukhanya (Mhlophe, pinki, orenji, tyheli, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, nemfusa) inokuhlengahlengiswa phakathi kwendlela yomjikelo ohamba ngokuthe ngcembe kunye nombala omnye kwimowudi emiselweyo.
2.I-Diffuser / i-Humidifier / Ukukhanya kobusuku: Yilahle ioyile oyithandayo kwaye ukonwabele ukusasazeka ngevumba ngelixa uhambisa umoya Kananjalo inokusenza njengesidambisi ngaphandle kweoyile ukongeza ukufuma ngakumbi. I-Romantic 7 imibala ye-LED ikhanyisa ukucinga komntwana wakho. Imibala esi-7 ejikelezayo yodwa okanye echanekileyo umbala omnye.
IZINTO ZOKUQINISEKISA UMGANGATHO WOKUGQIBELA: Ingaphandle lenziwe ngokukodwa ngeglasi ekhethekileyo.Xa kufikwa kwiiyunithi zethu zeoyile eziyimfuneko, senza inqaku lokungasebenzisi nto ngaphandle kwenqanaba elifanayo le-ultra-high, izinto ezikhuselekileyo kunye ne-eco-friendly, ngokunjalo Njengenkqubo zemveliso yobugcisa kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo.
4.I-PORTABLE: Izahlulo zeoyile eziyimfuneko zokuqhayisa ngobukhulu obuncinci kunye nokugqibeleleyo. Ngaphandle kokuhlala kwindawo eninzi, ifumana indawo ngokulula njengenkampani ngelixa ulele / usebenza / ufunda /. Uyilo oluphathekayo lwenza ukuba i-humidifier encinci ipakishwe ngokulula kwimithwalo yakho ukuqala uhambo olumnandi.
IINKCUKACHA ZESIPHO ESIPHELELEYO: Isisasazi seoyile siyazivalelela xa amanzi ephela. Esi sisasazi sevumba asizukuphazamisa ukufunda kwakho, ukusebenza okanye ukulala. Ilungele iKhaya, iYoga, igumbi lokulala, iOfisi, njl.njl. Umbono wesipho ogqibeleleyo wosapho kunye nabahlobo abathanda iaromatherapy okanye abanokuxhamla kunyango lweAromatherapy.
imveliso Inkcazo: DC12V, 1A
imathiriyeli IGLASI + ABS + PP
ukukhanya Ukukhanya kwe-LED enemibala
iiyure 4H / 8H / ON
Umthamo wenkungu 15-30ml / h
Ixesha lokugqibela 4-8hours
Ubungakanani beyunithi Φ9.4 * 21.2cm
Unit ubunzima 700g
Ubungakanani bebhokisi yemibala 14.6 * 14.6 * 27.2cm
Ubungakanani beCarton 44x44.5x55.7cm
NW / ibhokisi 11.5 Kum
GW / ibhokisi 12.5 Kum
I-SP-L28 300ml yodongwe isithethi seBluetooth sokulawula i-APP yokuhambisa ivumba le-ultrasonic
I-SP-G14M i-100ml yemisebenzi emininzi iwotshi ye-ultrasonic diffuser
I-SOICARE 4.3L yoLawulo lweSilawuli esiKhulu soBuchule obuKhulu boMoya oyi-Ultrasonic yomoya